Carruur agoon ah oo la guddoonsiiyay deeq lacag ah – Radio Muqdisho
Ardaydii ka baxday Iskoolka Bartamaha Sanadihii 1984 illaa 1990-kii ayaa lacag ay iska soo arruuriyeen waxaa lagu ciid siiyey caruur agoon ah kuwaas oo ku nool magaalada Muqdisho.
60-dan Agoon ah ayaa ka faa’iideysatay lacagtan ay iska soo arruuriyeen Ardaydii barasimaadkii ka baxday Iskuulka Bartamaha ee magaalada Muqdisho.
Munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta Iskuulka Bartamaha ee Degmada Shangaani ayaa waxaa lacagta la guddoonsiiyay Xidhibaan Yuusuf Xeyle Jimcaale oo gacanta ku haya carruurtan Agoonta ah, iyadoo canugiiba ku soo aaday lacag dhan 30 Dollar oo loogu talo galay in lagu ciidsiiyo.
Qaar ka mida Ardaydii hore Bartamaha ayaa sheegay in loo bahan yahay in markasta laga warqabo carruurta agoonta ah meelkasta oo ay dalka ka joogaan.
Carruurta lacagta ciidda la gudoonsiiyey ayaa qaar ka mida ah Waalidiintooda waxaa ay ku dhinteen Qaraxii 14-kii October ee sanadkii hore ka dhacay Igoyska Soobe, kaas oo dad badan noloshooda galaaftay.
Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada oo lacag ciidsiin ah u qeybiyey kudhawaad 100 carruur ah oo ay dhaleen wariyaashii ku dhintay Muqdisho “SAWIRRO”
Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada oo lacag ciidsiin ah u qeybiyey kudhawaad 100 carruur ah oo ay dhaleen wariyaashii ku dhintay Muqdisho "SAWIRRO"